बद्लिदैछ मान्छेको यौन–व्यवहार – Sky News Nepal
१४ भाद्र २०७८, सोमबार १३:२५ मा प्रकाशित
तर, समय जति–जति अघि बढ्दै गयो, समाज यौनको विषयलाई लिएर खुम्चदै गयो । यौनलाई ‘छाडापन’को रुपमा मात्र बुझ्न थाल्यो । महिला र पुरुषबीचको यौन सम्बन्धलाई कर्के नजर लगाइयो । तर, अब भने यौनको विषयमा ठूलो परिवर्तन आउँदैछ । यस्तो परिवर्तन जो क्रान्तिकारी छ ।
ल्याबमा बच्चा जन्माउने ट्रेन्ड बढ्नेछ
परम्परागत रुपमा यौनको अर्थ केवल बच्चा पैदा गर्नु र वंशलाई निरन्तरता दिनुमा सीमित थियो । तर, विज्ञानले यसमा छलाङ मारेको छ । अब यौन सम्पर्क नगरी पनि बच्चा पैदा गर्न सकिन्छ । आईभिएफ र टेस्ट ट्युबको माध्यामबाट यो काम फत्ते गर्न संभव छ ।
विश्वकै पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी सन् १९७८ मा पैदा भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म करिब ८० लाख बच्चा यही प्रविधिबाट धर्तीमा आएका छन् । रिसर्चलाई मान्ने हो भने यस किसिमको प्रविधि अपनाएर बच्चा पैदा गर्ने क्रम भविष्यमा अरु तिब्र भएर जानेछ । लेखक हेनरी टी ग्रीली भन्छन्, ‘अबको २० देखि ४० बर्षसम्म उमेरका जोडीले ल्याबमा गर्भधारण गर्न रुचाउँछन् । उनीहरु सेक्स बच्चा जन्माउन नभई आनन्द र रमाइलो लागि गर्नेछन् ।’
यदि यौन सम्पर्क बिना नै बच्चा पैदा हुन थाल्यो भने यौनको जरुरत किन ? यौन खासमा दम्पतीकोे यौन सुखभोगका लागि हो । दुबैको सम्बन्ध अरु कसिलो बनाउनका लागि हो । यदि शारीरिक सुखका लागि महिला र पुरुषले सुरक्षित अनि स्वस्थ हिसाबले यौन सम्बन्ध राख्छ भने त्यो न घृणाको विषय हो, न लाजको नै ।
ग्रीसका विख्यात दाशर्निकले यस विषयमा भनेका छन्, प्रेम कामुक इच्छाको अन्त्य हो । यदि दुई व्यक्तिबीच प्रेम छ भने उनीहरुको मुकाम शारीरिक सम्बन्ध बनाउनेसम्म हुन्छ । अर्थात एकअर्काको प्रेम पाउने माध्याम हो यो ।
हुनसक्छ, जतिबेला मान्छेले यौन सुरु गरे त्यसबेला शारीरिक आवश्यक्ता पुरा गर्नका लागि मात्र गरे । यौन सम्पर्क पछि बच्चाहरु पैदा हुन थाले । अनि यो पारिवारिक सम्बन्धकै एउटा कडी बन्यो ।
तर, अहिलेको समाज पूर्ण रुपमा बद्लिएको छ । अहिले यौन सम्बन्धलाई आयआर्जनको माध्याम पनि बनाउने गरेका छन् । कतिपय पेशेवर यौनकर्मी छन् ।
बद्लिदो समयसँगै आज केवल मान्छेको सम्बन्ध मात्र बद्लिएको छैन । यौन सम्बन्धलाई लिएर मान्छेको सम्बन्ध र सोंच पनि बद्लिदैछ । सन् २०१५ मा अमेरिकाका सैन डियागो युनिभर्सिटीका प्रोफेसर जीन एम ट्वीगले एक रिसर्च पेपरमा भनेका थिए सन् १९७० देखि २०१० सम्म अमेरिकामा धेरै हदसम्म मान्छेले विवाह नगरी यौन सम्बन्धलाई स्वीकार्न सुरु गरेका थिए ।
अहिलेका नयाँ पिढीं विवाहपछि मात्र यौन सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने पुरातन धारणामा विश्वास गर्दैनन् । उनीहरु यौनलाई अनेक सीमा र सर्तभित्र खुम्च्याउन चाहँदैनन् । पार्टनरसँग राजीखुसीले सुरक्षित सम्बन्ध राख्न कुनै रोकटोक नहुने धारणा राख्छन् । यसलाई न उनीहरु विकृति मान्छन्, न पाप ।
अहिले त महिला पुरुष मात्र होइन, पुरुष र पुरुष वा महिला र महिलावीचको अन्तरंग गतिविधिलाई पनि स्विकार्न थालिएको छ । जति जति यौनप्रति मान्छेको सोच बद्लिदैछ, उत्तिनै गे र लेस्बियन सम्बन्धलाई पनि स्विकार गर्न थालिएको छ ।
त्यसैगरी आज पोर्न हेर्ने प्रवृत्ति पनि बढेर गएको छ । जानकारहरु त के सम्म भन्न थालेका छन् भने भविष्यमा यौन अरु बढी डिजिटल र सिन्थेटिक हुनेछ । त्यती मात्र होइन, यौनका अरु नयाँ नयाँ तरिका पनि खोजिनेछ ।
सन् १९६० देखि २०१७ सम्ममा मान्छेको औसत आयु करिब २० बर्षले बढेको छ । अमेरिकी जीव वैज्ञानिक र भविष्यवादी स्टीवेन अस्टाडका अनुसार आउने समयमा मान्छे एक सय पचास बर्षसम्म बाँच्न सक्नेछन् । यति लामो जिन्दगीमा केवल एक मात्र सेक्स पार्टनरसँग जिन्दगी गुजार्न संभव होला ?
जे होस्, समयसँगै मान्छेको यौन जीवनमा परिवर्तन आएको छ । यसको सुरुवात भइसकेको छ । ठूला शहरमा यसको दृष्टान्त स्पष्ट देखिन्छ । दम्पतीबीच यौनकै निहुँमा सम्बन्ध विच्छेद भएको घटनाको चाङ छ ।
सन् २०१३ मा भएको एक सर्वे अनुसार अमेरिकामा हरेक दशमा चौथो जोडीको दोस्रो वा तेस्रो विवाह हुन्छ । आगमी दिनमा प्रतिबद्धता र वैवाहिक जीवनलाई लिएर नयाँ तौरतरिकाहरु आउन सक्छ ।